इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशले दिएको २६३ रनको लक्ष्य लक्ष्य पछ्याउने क्रममा अफागनिस्तानले पहिलो विकेट गुमाएको छ । उसले १०.५ ओभरमा २४ रन बनाएर खेलिरहेका रहमत शाहलाई गुमाएको हो ।
बंगलादेश क्रिकेट टिमका स्टार अलराउन्डर शाकिव अल हसन इंग्ल्याण्डमा जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा उत्कृष्ट लयमा छन् । उनले जारी विश्वकपमा धेरै कीर्तिमान आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेका छन् । सोमबार साउथ ह्याम्पटनमा अफगानिस्तान विरुद्धको खेलमा पनि शाकिवले केही रेकर्ड बनाएका छन्ः
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशले आफ्नो सातौ खेलमा अफगानिस्तानलाई २६३ रनको लक्ष्य दिएको छ । साउथ ह्याम्पटन क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बंगलादेशले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २६२ .रन बनायो ।
इंग्ल्याण्डमा जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत अफगानिस्तान विरुद्धको खेलमा बंगलादेशका शाकिव अल हसनले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले १ चौकाको मद्दतमा ६६ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । जारी विश्वकपमा शाकिवको यो तेस्रो अर्धशतक हो ।
इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत बंगलादेश विरुद्धको खेलमा अफगानिस्तानले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि साउथह्याम्टममा सुरु हुँदैछ ।
१२ औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज अफगानिस्तान र बंगलादेश खेल्दै छन् । यी दुई टिमबीचको भिडन्त नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि साउथ ह्याम्टनमा सुरु हुँदैछ ।
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा समूह बी मा रहेको अर्जेन्टिनाले आमन्त्रित टिम कतारलाई २–० ले पराजित गरेको छ । यो जीतसँगै सुरुवातका दुई खेलमा खराब नतिजा हात पारेको कारण तनाव रहेको अर्जेन्टिना अघिल्लो चरणमासमेत पुग्न सफल भएको हो ।
इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत ३० औं खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै पाकिस्तान विजयी भएको छ । आइतबार राति लड्स क्रिकेट मैदानमा दक्षिण अफ्रिकालाई ४९ रनले हराउँदै पाकिस्तान विजयी भएको हो । ३०९ रनको विजयी लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा आएको द. अफ्रिकाले निधारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २५९ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
पाकिस्तानविरुद्ध कप्तान डुप्लेसिसको अर्धशतक पूरा
आइतबार, ०८ असार २०७६ बुलबुल नेपाल
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान फाफ डुव्लेसिसले अर्धशतक पूरा गरको छन् । उनले ४ चौकाको मद्दतमा ६६ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । जारी विश्वकपमा फाफको यो दोस्रो अर्धशतक हो ।
पाकिस्तानले दियो दक्षिण अफ्रिकालाई ३०९ रनको लक्ष्य
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले आफ्नो छैठौं खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई ३०९ रनको लक्ष्य दिएको छ । लड्स क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ३०८ रन बनायो ।
विश्वकपः दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध बाबरको अर्धशतक
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध पाकिस्तानका बाबर आजमले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले ५ चौकाको मद्दतमा ६१ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । जारी विश्वकपमा बाबरको यो दोस्रो अर्धशतक हो ।
विश्वकपः पाकिस्तानका ओपनर ४४–४४ रनमा आउट
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध पाकिस्तान ओपनर फखर जमान र इमाम उल हक ४४–४४ रनमा आउट भएका छन् । फखर १५.५ ओभरमा र इमाम २०.३ ओभरमा आउट भएका हुन् । उनी दुवैलाई इमरान ताहिरले आउट गर्न सफल भए ।
गायक नवराज सापकोटाको नयाँ गीत ‘म निदाएसी आयौ’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । नरेश गौतमको शब्द सृजनामा एनके ब्रदरर्सको संगीत सृजना रहेको गीतमा पछिल्लो समयकी चर्चित मोडल अञ्जलि अधिकारीले अभिनय गरेकी छिन् ।
विश्वकपः पाकिस्तानले टस जित्यो, को–कोले पाए टिममा मौका?
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध पाकिस्तानले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि लड्स क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ । पाकिस्तानले आज प्लेइङ ११ मा २ खेलाडी परिर्वतन गरेको छ ।
पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै, विगत कस्तो छ?
इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज विश्व विजेता पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिका खेल्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि लड्स क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ ।
विश्वकपः वेस्ट इन्डिजलाई हराउँदै न्यूजिल्याण्ड शीर्ष स्थानमा
१२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई ५ रनले हराउँदै न्यूजिल्याण्ड अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । न्यूजिल्याण्डले दिएको २९२ रनको मध्यम लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा आएको वेस्ट इन्डिज ४९ ओभरमा २८६ रनमै समेटियो ।
बझाङका लागि छुटेको बस बर्दियामा दुर्घटना
काठमाडौंबाट बझाङका लागि छुटेको सुदूरपश्चिम यातायातको साइपाल डिलक्स बस बर्दियाको रम्भापुर नजिक आइतबार बिहान दुर्घटना हुँदा ३० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ५ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ । प्रहरीका अनुसार घाइतेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
विश्वकप क्रिकेटः अफगानिस्तानविरुद्ध भारत ११ रनले विजयी
शनिबार, ०७ असार २०७६ बुलबुल नेपाल
इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तानविरुद्ध भारत ११ रनले विजयी भएको छ । २२५ रनको लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तान ४९.५ ओभरमा अल आउट भयो । भारतको जीतमा तिव्र गतिका बलर मोहम्मद सामी नायक सावित भए । उनले आज ह्याट्रिक विकेट लिए । जारी विश्वकपमा ह्याट्रिक विकेट लिने सामी पहिलो बलर हुन् ।
कप्तान चम्किँदा न्यूजिल्याण्डले दियो वेस्ट इन्डिजलाई २९२ रनको लक्ष्य
इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा न्यूजिल्याण्डले वेस्ट इन्डिजलाई २९२ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको न्यूजिल्याण्डले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २९१ रन बनायो । उसका लागि कप्तान केन विपलयम्सनले शतकीय पारी खेले ।
विश्वकपः कप्तान विलियम्सनकाे लगातार दोस्रो शतक
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजविरुद्ध पनि न्यूजिल्याण्डका कप्तान केन विलियम्सनले शतक बनाएका छन् । उनले ८ चौकाको मद्दतमा १२४ बलमा शतक बनाएका हुन् ।
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजविरुद्धको खेलमा न्यूजिल्याण्डले तेस्रो विकेट गुमाएको छ । उसले तेस्रो विकेटका रुपमा ३४.३ ओभरमा ६९ रनमा रस टेलरलाई गुमाएको हो ।
विश्वकप क्रिकेटः वेस्ट इन्डिजविरुद्ध टेलरको अर्धशतक पूरा
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजविरुद्ध न्यूजिल्याण्डका रस टेलरले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले ६ चौकाको मद्दतमा ६८ बलमा अर्धशतक बनाएका हुन् । जारी विश्वकपमा टेलरको यो दोस्रो अर्धशतक हो ।
विश्वकप २०१९ मा विलियम्सनको दोस्रो अर्धशतक
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजविरुद्ध न्यूजिल्याण्डका कप्तान केन विलियम्सनले अर्धशतक बनाएका छन् । उनले ४ चौकाको मद्दतमा ७५ बलमा अर्धशतक बनाएका हुन् । जारी विश्वकपमा विलियम्सनको यो दोस्रो अर्धशतक हो । साथै उनले विश्वकप २०१९ मा एक शतक पनि बनाइसकेका छन् ।
विश्वकपः भारतद्वारा अफगानिस्तानलाई २२५ रनको लक्ष्य
इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा भारतले अफगानिस्तानलाई २२५ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २२४ रन बनायो । उसका लागि कप्तान विराट कोहलीले ६७, केदार जाधवे ५२, केएल राहुलले ३०, विजय शंकरले २९, महेन्द्रसिंह धोनीले २८, हार्दिक पाण्ड्याले ७ रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अंक रनमा बनाउन सकेनन् ।